Local Media - मेरो प्रतिस्पर्धा मसँग मात्रै छ-राम कुमार तामाङ्ग
मेरो प्रतिस्पर्धा मसँग मात्रै छ-राम कुमार तामाङ्ग
प्रकाशित समय: मगलवार, ०९ : ५७ बजे बैशाख २६ गते
राम कुमार तामाङ्ग नेपाली काग्रेंस बलेफी गाउँपालिकाबाट नेपाली काग्रेंसका तर्फबाट प्रमुखका उमेद्वार हुन् । २०३८ सालमा मांखा वडा नं ५ मा जन्मिएका तामागं सिन्धुपाल्चोकमा रहेका नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखका सबैभन्दा कान्छा उमेद्वार हुन् । शिक्षा क्षेत्रको विकासमा दशकौदेखि लागेका सिन्धुपाल्चोक भित्र शिक्षाप्रेमी, विकासप्रेमी युवा नेता का रुपमा चिनिन्छन् । काग्रेंसको क्षेत्रीय सदस्य रहेका लामा वलेफि गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन स्थानीय चुनावमा काग्रेंसका तर्फबाट उमेद्वार छन् । उनीसँग लोकल मिडियाले गरेको कुराकानी ।
समृद्ध गाउँपालिका बनाउन तपाइको योजना कस्तो छ ?
जहाँ नेपाली काग्रेंस त्यहाँ विकास भन्ने नेपाली काग्रेंसको मुल नारा हो । मैले महत्वाकांक्षी त्यस्ता केही योजनाहरु राखेको छैन् । यस गाउँपालिकाका जनताहरुलाई सहज जीवनयापनका लागि पुर्वाधार विकास मेरो पहिलो एजेण्डा हो। शिक्षा,स्वास्थ्य, यातायात , स्वच्छ खानेपानी, बिजुली बती हरेक घरघरमा पु¥याउनु मेरो पहिलो काम हुनेछ । हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो । परम्परागत कृषिलाई व्यवसायीकरण गरी आर्थिक उपार्जन गरी प्रत्येक व्यक्तिको आर्थिक अवस्थाबलियो बनाउन मेरो पहल रहनेछ । त्यसको लागि सिचाई सुविधा प्रत्येक वडामा पु¥याउनेछु । वलेफि गाउँपालिका सौन्दर्यलेभरिपुर्ण छ । पर्यटनको व्यवसायिक विकास गरी यहाँको आर्थिक व्यवस्था सुदृढ बनाउनेछु । यहाँका सडकहरुको स्तरोन्नति गरी बाह््ै महिना सडक सञ्चालन गर्न कालोपत्रे गर्न पहल गर्नेछु । शिक्षा क्षेत्र अलि अस्तव्यस्त छ । त्यसलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन तत्परताका साथ लागि पर्नेछु ।
तपाईको पालिकामा चुनावी माहोल कस्तो छ ?
चुनावी घरदैलो अभियानका क्रममा जनता नेपाली कागेंसप्रति एकदमै उत्साहित भएको पायौं । जनता प्रजातान्त्रिक समाजवाद तर्फ आकर्षित छन् । गाउँ गाउँमा डुल्दा नेपाली काग्रेंस सबको पार्टी हो भन्ने जनलहर छ । नेपाली काग्रेंसप्रति जनताको अपनत्वको भावना छ । सबै वडामा हामी बलियो छौं । केही वडाबाहेक गाउँपालिकामा हाम्रो जित सुनिश्चित देखिएको छ
तपाईको मुख्य प्रतिस्पर्धा कोसँग हुने देख्नुभएको छ ?
मेरो प्रतिस्पर्धा मसँग मात्रै छ । म जनताको कामको लागि प्रतिस्पर्धा गर्छु । ताकि चुनाव जित्न मात्र होईन् । म जनताको एजेण्डा लिएर जनताको लागि चुनावी मैदानमा छु । आम मतदाता नेपाली काग्रेंस र मप्रति विश्वस्त हुनुहुन्छ ।म टुरिस्ट उमेद्वार होइन । तपाइको आफ्नो परिवारको सदस्य हु । नेकपा एमालेको कुरा गर्ने हो भने उग्रराष्ट्रवादको नारा लगाएर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने पार्टी हो । उसको कुनै एजेण्डा नै छैन् । देशमा आउने संकटपुर्ण अवस्थामा सधै दोहोरो भूमिका खेल्ने गर्दछ । देशलाई विखण्डनमा पु¥याउने काम पनि एमालेले गरेको छ । त्यसैगरी नेकपा माओवादी सशस्त्र द्धन्द्धबाट राजनितिक मुलधारमा आएको पार्टी हो । जसले हजारौं जनताको जनभावनामाथि कुठारघात गरेको छ । यी दुवै पार्टीलाई सँगसँगै मिलाएर लाने दल नेपाली काग्रेंस मात्र हो । त्यसैले पनि मेरो प्रतिस्पर्धी कोही छैन । बलेफि गाउँपालिकामा मेरो अर्थात नेपाली काग्रेंसको जित निश्चित छ ।
तपाईको उमेद्वारी के का लागि ?
समृद्ध बलेफि गाउँपालिका निर्माणको लागि मेरो उमेद्वारी हो । अहिलेको २१ औं शताब्दीमा हामी रोग भोक र अशिक्षाबाट प्रताडित छौं । यी सबै आधारभूत आवश्यकता पुरा गरी यो पालिकालाई विकसित, नमुना पालिका बनाउन मेरो उमेद्वारी हो । सडक, बती, पानी ,शिक्षा, स्वास्थ्य गुणस्तरीय बनाउन जरुरी छ । सुत्केरी हुन नसकेर कोही आमा नमरुन्, शिक्षा नपाएर कोहीको जीवन नरक नहोस्, खानेपानीका लागि घण्टौं लाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् । बिजुली बती विना अध्यारोमा कोही बस्न नपरोस् । सडकको सुविधाबाट कोही वञ्चित हुन नपरोस भनि मेरो उम्मेद्वारी हो । यसका लागि म सधै कटिबद्ध भएर लागि पर्नेछु ।
अन्त्यमा तपाइको केही भन्नु छ ?
चुनावमा जित र हार स्वभाविक हो । जनताले जे दिन्छन् त्यो स्विकार्न म तयार छु । मैले हारे पनि जिते पनि जनताको लागि म सधै तत्पर रहनेछु । समृद्ध वलेफि गाउँपालिका बनाउन जनताको सामु रहेर म सधै काम गर्ने छु भन्ने मेरो प्रतिबद्धता छ ।